Unveiled: Robotic spy hummingbird | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » Unveiled: Robotic spy hummingbird
Unveiled: Robotic spy hummingbird
Posted by Zaw Wonna on Feb 18, 2011 in News, U.S. News |6comments
Robotic spy hummingbird
၁၆ စင်တီမီတာ ရှိ၍ AA ဓါတ်ခဲ တစ်လုံးထက် ပေါ့ပါးသော အိတ်ဆောင်အရွယ် သေးငယ်လှသည့် စက်ရုပ်ငှက်ငယ်ကို ပင်တဂွန်၏ အဓိက ကန်ထရိုက်တာ တစ်ခုမှ ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။
တစ်နာရီလျင် ၁၇.၇ ကီလိုမီတာနှုန်း ပျံသန်းနိုင်သော ထိုသူလျို စက်ရုပ်ငှက်ငယ်ကို အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄ သန်း အကုန်အကျခံကာ ၅ နှစ်ကြာမျှ အချိန်ယူ တီထွင်ခဲ့ရသည်။
ကျေးလက်နှင့် မြို့ပြ စစ်မြေပြင်များတွင် ၄င်းမောင်းသူမဲ့ စက်ရုပ်ငှက်ငယ်တွင် တပ်ဆင်ထားသော သေးငယ်လှသည့် ကင်မရာမှတဆင့် ရန်သူအား ထောက်လှမ်းနိုင်မည်ဟု စစ်တပ်အကြီးအကဲများ အနေဖြင့် မျှော်လင့်ထားကြသည်။
လက်ရှိပုံစံ ဖြစ်သည့် ပန်ကာပါသည့် စက်ရုပ်လေယာဉ်ငယ်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ဖွင့်ထားသော ပြတင်းပေါက်များကို ဝင်ရောက်နိုင်ခြင်း၊ လျှပ်စစ် ဓါတ်အားလိုင်းများပေါ်တွင် နားနိုင်ခြင်း စသည့် အားသာချက်များ ရှိနိုင်မည်ဟု ကျွမ်းကျင်သူများ အနေဖြင့် မျှော်လင့်ကြသည်။
ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး မောင်းသူမဲ့လေယာဉ် ပေးသွင်းသည့် AeroVironment ကုမ္ပဏီမှ ပြသရာတွင် တံခါးမှတဆင့် အဆောက်အအုံ အတွင်းသို့ ဝင်ထွက်ပျံသန်းခြင်း၊ တစ်နာရီ လေတိုက်နှုန်း ၈ ကီလိုမီတာ ရှိသော အခြေအနေတွင် လေထဲ၌ ရပ်တန့်ခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့သည်။
ဗွီဒီယိုဖိုင်ကို ကြည့်ရှုလိုပါက Click here.
Image/video sources: dailyail.co.uk/AeroVironment Inc.
Published Feb 18 2011
ငှက်ကလေးက ချစ်စရာ ကောင်းလိုက်တာကွယ်။ တန်ကြေး မနည်းဘူးနော်။ စပိုင်ဆိုတော့ ကောင်းကောင်းတော့ အလုပ်လုပ်မှာပေါ့။ အိမ်မှာ တကောင်လောက် ခေါ်မွေးထားချင်တယ်။
အိမ်မှာ ဆူးမမဂျွမ်းထိုးနေတာတွေ … ဗီဒီယိုရိုက်ပြီး .. ယူတုပေါ်တင်ပေးလိုက်မှ.. ဟုတ်ပေ့ဖြစ်နေမယ်..။ စပိုင်ပါဆိုနေမှ..။
စပိုင်ပါ ဆိုမှ စပိုင် လုပ်ချင်လို့ပေါ့.. အိမ်ခေါ်ထားမှ.. သူကို ခိုင်းချင်တာ ကွန်မန်းပေးမှ သိမှာပေါ့ ဆရာခိုင်ရဲ့.. တိဝူးလား.. ခိုင်းချင်တာလေးတွေ ရှိနေလို့။
ခိုငှက်တွေကို ဒီလို စပိုင်လုပ်ခိုင်းလေ့ရှိတယ်
သတင်းထဲပါလာရင်… အဲဒီလိုအကောင်ထက်…၂ဆမကစွမ်းတဲ့အကောင်ကို ထွင်ပြီးသုံးပြီးနေပြီ..။
မြန်မာပြည်လည်း.. စပိုင်လုပ်ဖို့ .. ရောက်နေလောက်ပါပြီ။
Here is another article on ‘robotics’
Nov 1st 2007 | from PRINT EDITION
EVER since Karol Capek,aCzech playwright, used the term in the early 1920s to describe artificial people, robots have usually appeared in popular culture with human characteristics and made by big companies. There was the Model B-9Environmental Control Robot in “Lost in Space”; Rosie, the robot maid in “The Jetsons”; C-3PO in “Star Wars”; and the future Governor Schwarzenegger as “The Terminator”.
In the real world, however, things tookadifferent turn. The number of robots has grown rapidly, but they are not humanoid. After the first Unimate robot-arm began work onaGeneral Motors assembly line in 1961, industrial robots of all shapes and sizes invaded the factory floor: there are now about 1m of them worldwide, around half in Asia. There are also hordes of service robots, vacuuming floors, trimming the grass on golf courses and soon—with luck—doing the ironing. Specialist robots can creep insideapatient’s chest cavity to attach electrodes toapacemaker or along sewer pipes looking for cracks. Robots have also joined the armed forces: some 4,000 are said to be in action in Iraq and Afghanistan doing things such as clearing mines or, as unmanned aerial vehicles (UAVs), flying reconnaissance and even combat missions.
Many of today’s robots still haveahuman controller somewhere, but they are gaining more and more autonomy. By 2015, America’s armed forces want about half their armed vehicles to be robotised. To further that aim, this weekend the Defence Advanced Research Projects Agency is holdingacontest for robot vehicles capable of operating on their own in busy cities (see article).